Notre-Dame: badbaadinta dhismaha "waxaa lagu ciyaaray daqiiqado 15-30" - TELES RELAY
ACCUEIL » International Notre-Dame: badbaadinta dhismaha "waxaa lagu ciyaaray daqiiqado 15-30"
Dab-demiyeyaasha, waxay abaabuleen taniyo habeenkii isniinta si ay u demiyaan dabka of Notre-Dame, ayaa ka soo horjeeda ololaha horaantii talaadada. Burburin, dhismaha cathedral ayaa muujinaya calaamadaha "nugul", ayuu yiri Laurent Nunez.
Dhismaha Notre Dame-de Paris "Waxay qabataa wanaagsan" ka dib markii dabkii burburay dhismaha cathedral laakiin "nugul" ayaa lagu aqoonsaday dhismaha oo ay ku jiraan vault, ayaa sheegay Talaadadii Xoghayaha Arrimaha Dibadda Laurent Nunez.
Falanqayntan ayaa la sameeyey intii lagu jiray kulan khubaro ah, oo ay ku jiraan maaddooyinka dhismaha booliiska iyo dhismayaasha Faransiiska.
"Dabku waa uu dhammaaday, hadda walaaca ugu weyn (...) waa in la hubiyo in dhismuhu uusan hoos u dhicin," Laurent Nuñez ayaa saxaafadda u sheegay.
"Waa in sidoo kale la xaqiijiyaa woqooyiga gawaarida ah," ayuu yiri xoghayaha dawladda, kaas oo horseeday dhismaha shan goobood oo ku yaala meel u dhow, Cloister Street, ugu yaraan saacadaha 48, waqtiga shaqada ammaanka gudaha.
Amber Lepoivre oo la socda AFP